Waa maxay ERTMS / ETCS? - Teknolojiyada Tareenka | RayHaber | raillynews
HomeGUUDWaa maxay ERTMS / ETCS? - Teknoolojiyada Tareenka
Waa maxay ERTMS / ETCS? - Tiknoolajiyada Tareenka: ETCS (Nidaamka Xakameynta Tareenka Yurub), oo loo yaqaan Nidaamka Xakamaynta Tareenka ee Yurub, oo ay isticmaalaan wadamo badan oo Yurub ah, waa nooc ka mid ah calaamad muujinaysa tareenada xakameynaya tareenada bartamaha.
Marka la barbardhigo shabakadda tareenka ee sii kordheysa ee wadamada Yurub, gaadiidka tareenka ee waddooyinka ayaa sidoo kale sii xoojiyay. Dhibaatooyin ayaa ka dhex maray waddamada iyadoo la adeegsanayo nidaamyo kala duwan, kuwaas oo isku dayay in lagu xalliyo iyada oo bedelaya tikidhada ama iyada oo la abuurayo tareeno qalab lagu xallin karo laba habab oo kala duwan. Intaas waxaa dheer, darawalladu waxay u baahan yihiin tababbarro gaar ah oo loogu talagalay nidaamyada kala duwan Wadankan Yurub, oo xudduudaha si tartiib tartiib ah u kordhaya, xawaaraha tareenada sii kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa, ayaa nidaam loo sameeyay iyada oo lagu magacaabo Nidaamka Maareynta Tiknoolajiyada Tiknoolajiyada ee Yurubta (ERTMS) sababahaas oo saameyn ku yeesha taraafikada. Ujeedada halkan; Waa isticmaalka luuqad muujinaysa wadamada yurub. Shirkadaha soo saarey nidaamyadan waa inay isticmaalaan luqaddaan caanka ah ee caanka ah, marka laga reebo isticmaalka gaarka ah, iyada oo aan kala duwaneyn. Sidaa awgeed, khilaafka tareenka iyo qalabka isgaarsiinta ayaa la baabi'iyay waxaana la abuuray gaadiid tareen oo degdeg ah oo ammaan ah intii lagu guda jiray kala guurka waddanka. Maareynta gaadiidka tareenada kali maaha mid ku filan. Nidaam loo xakameyn karo tareenada fog waa in loo sameeyaa gaadiid ammaan ah iyadoo la yareeyo dhibaatooyinka ay sababaan qaladaadka aadanaha. ETCS ayaa loo sameeyay si loo daboolo farqigaas. Horumarinta farsamooyinka isgaarsiinta macluumaadka elektaroonigga ah ayaa kor u qaaday tayada qalabka tareenka iyo qalabka wareejinta macluumaadka tareenka, sidaas daraadeed bixinta gaadiidka amaanka leh ee shaqaalaha tareenka oo yar. ERTMS, waa faahfaahin sax ah oo loogu yeedho isku dhafka ETCS iyo GSM-R.
Waxaa loo yaqaan 'ERTMS / ETCS'. Mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee nidaamkan waa habka kumbuyuutarka ee xakameynaya calaamadaha ERTMS / ETCS iyo xogta tareenka. Waxay xawileysaa macluumaadka xarriiqda ee loo diro xarunta xakameynta, waxayna u direysaa injineernimada, iyada oo la tixgelinayo xawaaraha hadda ee tareenka, waxaanay hubineysaa in injineerku uu u hoggaansamayo farriimaha calaamadaha. Haddii xadka xawaaraha uu dhaafo, makiinadda ayaa digniin u diri doonta. Haddii aysan wakhti gaaban ka jawaabin darawalka, waxay hoos u dhigi doontaa tareenka ama gawaarida gawaarida degdegga ah oo joojiya tareenka. Hoosudhiska ama hannaanka joojinta ama macluumaadka ku saabsan tareenka ka muuqda shaashadda darawalka ayaa sidoo kale laga heli karaa xarunta xakamaynta haddii la codsado, iyadoo ku xiran heerarka ERTMS / ETCS ee loo isticmaalo. Xaaladda maaliyadeed ee dalalka ayaa loo qaabeeyey saddex heer oo kala duwan marka la eego farqiga farqiga u dhexeeya sinaanta iyo macluumaadka xakamaynta xarumaha tareenada iyo kontoroolka, iyada oo la tixgelinayo kala duwanaanshaha tareenka iyo khadka. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu sameyn karaa nidaam isku dhafan iyadoo la isku darayo sifooyinka kala duwan ee heer kasta.
Mid ka mid ah qalabka loo isticmaalo ERTMS / ETCS waa GSM-R.
GSM-R: GSM (Global System of Commutacion) ayaa loo yaqaan nidaamka isgaadhsiinta moobiilka caalamka, nidaamkani maanta waa qalab aan loo baahnayn oo loo isticmaalo nidaamka shabakadda taleefannada gacanta. hirarka Radio, sababtoo ah dhismayaasha dhaadheer ee la deggan yahay ama laga qaxo dalka meelo aysan gaarin, laliska yar gobolka (saldhigyada saldhig) iyada oo loo marayo hubinta gaadiidka waa hab u ogolaanaya isgaarsiinta digital aan xuduud lahayn oo aan loo eegin meesha ay ku sugan geographies jira. Dabcan xarumaha saldhigga waxay leeyihiin awood ay ku soo diraan oo ay helaan xogta illaa meel fog. Meeshaan awooddaasi ku filneyn, saldhig kale oo saldhig ah ayaa la dhigaa oo daboolayaa baahinta.
"R ee dhamaadka waa warqadda ugu horeysa ee ereyga" Rail ". Gaaban, nidaamkani wuxuu u muuqdaa mid qaab u habaysan jidka tareenka. Nidaamka waxaa loogu talagalay in la dhigo saldhig saldhiggeedu yahay masaafo gaar ah oo ku yaalla xariiqyo, ama inta u dhaxaysa xarriiqaha u dhow midba midka kale. Wareegga, saldhig u gaar ah ayaa lagu rakibayaa iyadoo ku xiran dhererka tunnelka. Markii markii hore la qorsheeyay, waxaa suurtagal ahayd in laga hadlo xarunta dhexe iyo shaqaalaha tareenka. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka wareejinta xogta degdega ah, faahfaahinta tilmaamaha iyo tareenka booska ayaa sidoo kale noqda mid loo wareejin karo kontaroolada tareenada ee fog Sidaa darteed, isgaarsiinta muhiimka ah ee u dhaxeeya tareenka iyo xarunta waa la hubiyaa.
ERTMS / ETCS Heerka 1:
Waa nidaam lagu dhisi doono xarun tareenka xawaaraha sare ee Ankara-Istanbul ee dalkeenna. Nidaamka of balise waxa loo xiraa si joogto ah weheliyaan khadka (Balis: lifaaqan on mid laylan ee khadka, iyada oo hirarka electromagnetic waa dareemayaal dhiseysa xiriir rail), iyada oo loo marayo kala duwan gaaban la ruxruxo radio diraya line galin in antenna iyo line geesaha, gelinayn tilmaame midabka signal iftiin, waxay calaamad u macluumaadka, tareenka weeraryahanada. Muujinta calaamadeynta waa nidaamka calaamadaynta. Xawaaraha ugu sareeya ee xiga xiga, masaafada u dhaxaysa tareenku wuu joogsanayaa iyo waxyaabo xaddidaya xawaaraha tareenka sida tunnel iyo curbo ayaa loo gudbiyaa qalabka tareenka ee tareenka ee qalabka kor ku xusan. Isticmaalaha ERTMS / ETCS ee tareenka wuxuu xambaarsanyahay macluumaadkan calaamadaha wuxuuna si toos ah ugu gudbiyaa xogta macluumaadka ee tareenka tareenka, ama haddii tareenku leeyahay kombuyuutarkiisa, macluumaadka waxaa loo gudbiyaa injineerkan iyada oo la adeegsanayo kombiyuutarkan iyo kormeerka ku xiran. Nidaamka digniinta iftiinka ee dhinaca khadka ayaa sidoo kale bixiya macluumaad ku saabsan calaamadda. Tallaabada xigta waa in la hubiyo in darawalku u hoggaansamayo macluumaadka calaamadaha. Haddii aan la ogaanin macluumaadka astaamaha, tareenku wuxuu geli karaa fariin degdeg ah. Haddii kale, haddii xawaaraha xawaaruhu ka sarreeyo xadka hooseeya, digniin ayaa loo diraa mishiinka waxaana la filayaa inuu hoos u dhaco xawaaraha la cayimay wakhti gaaban. Haddii aan la gaarin xawaaraha la dhigay, tareenka oo leh kombuyuutarkiisa ayaa tareenka laftiisa ka dhigaa. Tareenada aan lahayn kombuyuutar, xaaladda degdega ah ee degdega ah ayaa la bilaabaa ka dib.
Heerka 1 waxaa si fudud loo dhisi karaa heerarka kale iyada oo la qabsashada fudud ee xariiqyada iyadoo la adeegsanayo nidaamka signalka CTC. Waxay ubaahan tahay labada xawli ah iyo kuwa caadiga ah, waana nidaam dhaqaale marka la barbardhigo heerarka kale iyada oo loo tixgelinayo isbedelka fudud ee tikidhada kuwaas oo aan dhammeystirin noloshooda dhaqaale ama la soo saaro tiknoolajiyadii hore.
ERTMS / ETCS Heerka 2:
Waa nidaamka calaamadaynta taas oo muujinaysa macluumaadka isgaarsiinta ee loo gudbiyo tareenka waxaa lagu gudbin karaa tareenka iyadoo loo marayo GSM-R. Calaamadaha xaddidan ayaa lagu dabaqayaa Nidaamkan, qalabyada kale ee calaamadaha ah ee khadka la socda ayaa laga yaabaa inaan laga helin codsiga, marka laga reebo baalasha ku wargeliya barkinta tareenka ku yaala, taas oo bedeli karta tareenka ATS ee xaalado aan caadi ahayn ama xaalad degdeg ah. Faa'iidada nidaamkan ayaa ah in ay u gudbin karto isbeddelka isbeddelka tareenka isla markiiba xaalad degdeg ah. Waxaa loogu talagalay dhibaatada aaney arag calaamadaha muuqaalka ee dhinaca darawalka darawalka inta lagu jiro tareenada xawaaraha sare. Tareeno caadi ah oo isticmaali doona nidaamkan waa in ay haystaan ​​kombiyuutarkooda ama nidaamka xakamaynta elektarooniga ah. Haddii xaaladaha isbedelka degdegga ah ee isbeddelka ah loo rogo, macluumaadka kontoroolka lagama maarmaanka ah waxaa loo diraa tareenka iyadoo loo marayo GSM-R si loo yareeyo tareenka xawaaraha qeexan halkii laga joojin lahaa. Macluumaadka ay ka baaraandegayaan kontoroolka ERTMS / ETCS ee gudaha tareenka ayaa si deg deg ah loogu soo bandhigaa shaashadda darawalka hortiisa. Macluumaadkan waxaa loo gudbiyaa tareenada ama tareenada ka soo socda dhinaca dambe si loo hubiyo joogteynta wareegga badbaadinta. Gaar ahaan tareenada loo shaqeeyo waqtiyada soo noqnoqda, joojinta taraafikada ayaa looga hortagaa xaaladaha aan loo baahnayn.
Intaa waxaa dheer, maaddaama GSM-R ay muhimad muhiim u tahay soo gudbinta xogta wargelinta ee nidaamyadan, haddii ay dhacdo in mawjadaha GSM-R raadsado, tareenku si toos ah ayuu u joojiyaa ama loo yareeyaa xadka xawaaraha caadiga ah ee horey loogu kaydiyey nidaamka. Guud ahaan waxaa loo adeegsadaa si loo yareeyo xawaaraha ilaa xadka xawaaraha caadiga ah. Xaaladdan, waxaan sii wadi karnaa qalabka muuqaalka muuqaalka iyo xakamaynta kubada.
ERTMS / ETCS Heerka 3:
Waa nidaam la iska qaadayo imtixaano kala duwan oo isdaba joog ah oo joogto ah sababtoo ah iyada oo la isweydaarsado farsamooyinka wareejinta macluumaadka elektiroonigga ah ee nidaamkaan. Tareenka waxaa si buuxda u maamulaya GSM-R. Intaa waxaa dheer in la qaado macluumaadka war-gelinta, GSM-R ayaa sidoo kale xambaarsan macluumaadka xakameyn kara tareenka. Miisaaniyadu waxay ku yaalaan xariiqda ujeedka ujeedada xaqiijinta goobta iyo ATS. Tijaabada xakamaynta looma adeegsan karo nidaamkan. Shaashadda ku jirta xarunta xakamaynta, dhaqdhaqaaqa tareenka ayaa la socda miisaanka. Iyadoo ku xiran xawaaraha tareenka, waddada ay qaadato waxaa lagu xisaabiyaa kombiyuutarada waxaana lagu caddeeyey ballaadh. Dhammaan macluumaadka la xidhiidha tareenka iyo signalka, oo lagu soo bandhigo kormeerayaasha darawalka darawalka, ayaa sidoo kale lagu soo bandhigaa kormeeraha maraakiibta, marka loo baahdo. Waxaa jira isbeddel joogto ah oo u dhexeeya kombuyuutarka ee xarunta xakamaynta iyo kombiyuutarka tareenka iyadoo la marayo processor-ka codka ah ee ERTMS / ETCS. Isbeddel degdeg ah oo ku saabsan macluumaadka wareegga ayaa loo gudbin karaa kombiyuutarka tikidhada saacadaha. Kombiyuutarka tareenku wuxuu u diraa macluumaadka socdaalka ee darawalka iyada oo loo marayo kormeerka qunsuliyadda ee baaritaanka iyo in uu hubiyo in tareenka la maareynayo iyo in kale. Si la mid ah nidaamka autopilot ee diyaaradaha, tareenka ayaa la maamuli karaa iyada oo aan darawal. Dabcan, tareenka oo celceliya rakaabka rakaabka 320 xawaare ka mid ah 450km / h ma aha oo keliya kantaroolka kumbiyuutarrada.
Nidaamka xakamaynta tareenada fog waxaa loo isticmaalaa in lagu xalliyo khaladaadka darawalnimada iyo faragelinta dhacdooyinka aan caadiga ahayn iyada oo aan loo baahnayn joojinta tareenka isla markaana u oggolaanaya gaadiidka safka inuu joojiyo ama yareeyo. Daraasad horay loo eegay, dhacdooyin badan ayaa loo diyaariyey dhacdooyin aan caadi ahayn. Mid ka mid ah ayaa ah khatarta degdegga ah ee darawalka. Nidaamka cusub wuxuu wadaa tareenada xawaaraha sare, darawalka kaliya. Dhibaatada awgeed, marka darawalka la xidhiidha "looxa laydhka" ama "latch cut" ayaa la joojinayaa, kumbuyuutarka tareenku wuxuu isla markiiba dejiyaa macluumaadka calaamadaha la heli karo isla markaana wuxuu si dhakhso ah u wargalinayaa xarunta. Xiriirka telefoonka waxaa lagu sameeyaa darawalka ama qof kale oo tareen ah. Haddii darawalku uu ku jiro xaalad halis ah, ambalaas ayaa loo dirayaa xarunta ugu dhow. Xaaladdan, tareenku wuxuu sii wadi doonaa kumbuyuutarkiisa. Sidaa daraadeed, labadaba khadka taleefanka labadaba looma hor istaagi karo luminta daqiiqadaha qiimaha leh ee nolosha darawalnimada ayaa laga hortagayaa. Dhacdooyinka noocaan oo kale ah ayaa weli la baranayaa, imtixaannana waa la qabanayaa. Marka la barbardhigo heerarka kale, tareenka waxaa loo isticmaali karaa in badanaa, si amaan ah. Gaar ahaan tareenada u safraya jihooyinka kala duwan, laakiin isticmaalaya qayb ka mid ah xariiqa jira, safar badan oo safar gaaban ayaa muhiim ah. Tareenada loo isticmaalayo nidaamkan waa inay lahaadaan tiknoolajiyada ugu dambeeya ee kontoroolka.
Heerka 3 wuxuu ku salaysan yahay tiknooloojiyada GSM-R kaas oo hubiya isgaarsiinta xogta joogtada ah oo degdeg ah. Horumar ayaa lagu sameynayaa GSM. Tani waa tiknoolajiyadda 3G (3. Generation GSM) ee inta badan annaga ka aragto telefishanka ama xayeesiinta wargeysyada. Waxaan hadda isticmaalnaa 2. Tiknoolajiyada 3G, oo siiya macluumaadka si dhakhso ah u gudbinta jiilka soo socda, wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan, laga bilaabo video-ka dhabta ah si loo isticmaalo internetka xawaaraha sare. Waxa kale oo ay leedahay faa'iido weyn oo ka jirta mugga xogta wareejinta ee loo isticmaalo heerka 3. Khasaaradani waa tan, iyada oo ku xidhan xaaladaha amniga iyo xawaaraha, xawaaraha wareejinta xogta marka aad safarka si weyn u yareeyso. Si aad u bixiso tusaale, heerka xogta gudbinta ee 100 km / h ayaa laga yaabaa in ay ka badan tahay 50%. Waxaa intaa dheer, waxaa jiri doona dhibaatooyin halis ah ee wareejinta xogta xawaaraha 300km / h. Tani ma wanaagsana horumarka mustaqbalka ee heerka 3. Tiknooloojiyada 3G ayaa la horumarinayaa si loo daboolo farqigaas 4G. Tiknoolajiyadaani waxay ku jirtaa tijaabo dhowr waddan. Waxaa la filayaa inay noqoto mid baahsan oo mustaqbalka dhow. Waxay noqon doontaa lama huraan in nidaamka GSM-R loo isticmaali doono si isbarbar dhigo horumarka heerarka ERTMS / ETCS 3 waxay yeelan doonaan 4G.
Waxaa lagu dari karaa heerarka hadda iyadoo la isticmaalayo qaar ka mid ah astaamaha heerarka kor ku xusan. Tusaale ahaan, nidaamka heerka 1, GSM-R ayaa loo isticmaali karaa. Ama nidaamka heerka 2 wuxuu isticmaali karaa qalabka digniinta fudud. Tani waxay ku xiran tahay noocyada kala duwan ee tareenada iyo tareenada loo isticmaalo.
Sincan - Inönü ERTMS - Mashruuca Qalabka ETCS 2 Mashruuca Shirkadda dhismaha
Sheybaarada Imtixaanka ETCS
Nidaamka Kontoroolka Tareenka Yurub (ETCS) Qaybta 1aad Mashruuca Madrid RENFE wadada dibedda…
Bulgaariya waxay fureysaa Xarunta Xakamaynta Saxiixa ETCS ee Plovdiv-Svilengrad
Hungary waxay qandaraas la leedahay Siemens shaqooyinka ETCS
Ogeysiiska Qaadashada: YHT Qaabka Heerka iwm. 1 / 2 Qalabka Gudbinta
Ankara-Istanbul khadka tareenka xawaaraha sare ee ETCS qaybta laba mashruuc cusboonaysiinta…
Ansoldo STS waxay ku guuleysatay hindise ETCS 1 u dhexeeya Gebze iyo Köseköy
Ertms World Conference 1 Bilawday Abriil ee Istanbul
Habka Xakameynta Tareenka Yurub
Tareenada Nostalgic ee waddooyinka Moscow
Gobolka Tansaaniya Iskuduwaha Tiknoolajiyada Tareenka ee Ditecere EurAsiaRail at 2016
Macallimiintu waxay u sheegi karaan Iskuullada Railways
ESO-da si ay uga qaybqaataan Bandhigga Bandhiga Caalamiga ah ee Tamarta ee Innotrans 2012